Publié le 27 Avril 2014 par Jeannot Ramambazafy
FORMAT PDF ETO
Tsy nieranà akory ny andro nitsanganan’i Jesosy tamin’ny maty (Paska) dia nitohy indray ny praograma fandemena ataon’ilay filoha milaza fa matahotra an’Andriamanitra sy hanaja ny lalampanorenana, ka dia nampitanjahany indray koa ireo solontena sy solovavan’ny vahoaka (depiote) voafidy ara-dalàna, ka ho lasa olo-tsotra toa ianao mpamaky hajaina io. Ny fiantombohan’ny tantara ratsin’ingahy Hery Rajaonarimampianina dia hitanao ATO. Fa ity ny tohiny, telo volana katroka taorian’ny nanaovany ilay fianianana feno lainga sy fitaka.
"JE suis le président élu du peuple malgache"
Efa tsy ampy azy intsony ny fahefany maha filoha voafidim-bahoaka azy, ary tsy mahatoky an’iza n’iza izy satria ny mpandainga sy mpamitaka dia kanosa eny foana ka na dia efa fanta-poko, fantam-pirenena fa fitondrana mizara (“régime semi-parlementaire”) ny repoblika faha-efatr’i Madagasikaraka, dia tiany ho azy samy irery ary hivangongo eo am-pelatanany ny fahefana rehetra ("pouvoir absolu"). Asa ataony inona marina, fa ireo ihany no hanototra azy amin’ilay ora tsy hampoiziny.
Mety hilaza izy sy ny manompony fa repoblika laïka i Madagasikara. Eny, tompoko. Fa ny vahoaka Malagasy dia vahoakan’Andriamanitra ary ilay filoha be fitaka (be fika, hoy ireo tanora) dia nianiana teo anatrehan’Andriamanitra alohan’ny rehetra. Ny fomba fitantànana no tsy hidiran’ny finoana fa ny tsirairay -amin'ny mponina maro an'isa eto amin'ny Nosy- dia mino sy mivavaka daholo. Sa ho foanana koa, atsy ho atsy, ireo fiangonana maro be misy eto amin’ny firenena ? Efa nisy izany ka tsy tokony atao mahagaga.
Jean Eric Rakotoarisoa, mpikambana "vaovao" sy itokisany ao amin'ilay HCC mahataka-danitra, arahabain'ilay filoha mikotrika ny ho mpanjaka. Ovao amin'ny anarany daholo rangahy ny Lalampanorenana manontolo a !
Ny fitaka farany nataon’ilay filoha manana anarana lava be indrindra eran-tany dia ity: ny 18 aprily 2014 dia nandefa taratasy tany amin’ilay HCC malalany ilay filoha Hery Martial. HCC izay nanamasina nikipy maso ilay “ordonnance” avy any amin’io filoha io, izay lasa lalàna velona mikasika ireo fitsipika mifehy ny Antenimieram-pirenena ao Tsimbazaza. Ka dia veloma hatreo ry fisaraham-pahefana (“séparation des pouvoirs”) fa lasa fahefam-panjaka (“monarchie”) tanteraka ny eto Madagasikara.
Ramatoa Christine Razanamahasoa, Filoha vehivavy voalohany voafidy ho Filohan'ny Antenimieram-pirenena malagasy. Tsy raharahiny izany ary tsy asiany hasiny intsony izany hoe OLOM-BOAFIDY izany. Ny vahoaka amin'izany efa "sujets communs des mortels" daholo izany, satria izy ireo no te-hifidy azy kou !
Tsy hisy adihevitra sy mpanohitra intsony izany ato fa hanangana tanàna fotsiny ihany an-katoa ny praograma izay handalo eto.
"Aza kitikitiana na ovana ny Lalampanorenana na fehezan-teny iray monja aza. Io no antoky ny fahafahan-tsika", hoy ny Filoha amerikana Abraham Lincoln. Ny eto Madagasiraka indray dia : kitihiko amin'izay hitiavako azy io satria izaho voafidin'ny vahoaka. Izay nanao izany anefa dia nazeran'ny vahoaka daholo (Tsiranana, Ratsiraka, Zafy, Ravalomanana). Tena mahatalanjona tokoa izany tsy mba maka lesona amin'ny Tantara e !
Raha tsorina dia azo henjehina tsy misy fepetra ireo depioten-tsika ireo ao anatin’ny fotoam-piasany. Ary mora dia mora ny mamorona "dossier" rehefa ampiarina ny alako bika tsy tiako tarehy... Inona anefa ny voavaky ao anatin’ny lalampanorenana izay nolazainy fa ho tandroviny toa ny anakandriamasony ?
Andininy 73.- Tsy misy solombavambahoaka na dia iray aza azo enjehina, karohina, samborina, tànana am-ponja, na tsaraina noho ny hevitra naposany na latsabato nataony teo am-panaovana ny asany.
Tsy misy Solombavambahoaka na dia iray aza azo enjehina sy samborina noho ny heloka bevava na heloka tsotra mandritra ny fotoam-pivoriana raha tsy nahazoan-dàlana tamin’ny Antenimiera, raha tsy hoe tratra ambodiomby (“flagrant délit”).
Tsy misy solombavambahoaka na dia iray aza azo samborina ivelan’ny fotoam-pivoriana, raha tsy nahazoan-dàlana tamin’ny Biraon’ny Antenimiera, raha tsy hoe tratra ambodiomby, noho ny fanenjehana nomena alàlana na ny fanamelohana tanteraka.
Afaka manao fitarainana an-tsoratra any amin’ny Birao maharitry ny Antenimierampirenena izay rehetra olona manana fanamarihana momba ny tsy fahavitan’ny solombavambahoaka iray ny asa nankinina taminy. Tsy maintsy manome valiny amin'ny antsipiriany mikasika ilay raharaha ny Birao ao anatin’ny telo volana.
Io resaka “immunité parlementaire” io dia lalàna iraisam-pirenena, toa ny « immunité diplomatique ». Izany hoe atsy ho atsy koa dia azon’ny fanjakana Rajaonarimampianina ny manokatra ireny « valises diplomatiques » ireny sao ao no misy ny volan’ny andramena… Aleho atao amin’ny teny frantsay ny fanazavana io « immunité parlementaire » io ary mihatra maneran-tany :
L’immunité parlementaire est une disposition du statut des parlementaires qui a pour objet de les protéger dans le cadre de leurs fonctions des mesures d'intimidation venant du pouvoir politique ou des pouvoirs privés et de garantir leur indépendance. L'immunité parlementaire est liée à la durée du mandat. Elle est « personnelle », elle ne concerne donc que le parlementaire lui-même. Elle ne s'applique ni à sa famille, ni aux personnes à son service, ni à ses complices éventuels. Elle ne s'étend, ni à son domicile, ni à son lieu de travail et permet ainsi la saisie de ses biens ou une perquisition domiciliaire. La levée de l'immunité parlementaire est possible mais elle est « partielle » puisqu'elle ne concerne que l'inviolabilité et « subsidiaire » en ce qu'elle n'empêche pas le parlementaire de conserver son siège au Parlement bien qu'elle puisse l'empêcher d'y siéger physiquement. L'immunité parlementaire est « préalable » à toute mesure judiciaire nécessitant sa levée et constitue un moyen « d’ordre public ».
Santionan'ireo "immortels" na hoe hitoetra eo mandrakizay
Manginy fotsiny ilay hoe tsy mahazo manao « pétition” (fitarainana an-tsoratra) intsony ireo depiote ireo ao anatina fivoriana. Inona izany no ilana io Antenimieram-pirenena io ? Tsy aleho ve tonga dia foanana fotsiny izao ? Ary na ny Antenimieran-doholona -mbola tsy nitsangana- aza mety ho voafehin’ireo fepetra jadona ireo. Izany hoe : voahitsakitsaka tanteraka ny zon'olombelona ("droits de l'homme") sy ny fahafahana maneho hevitra ("liberté d'expression") manomboka eto. Tena tany tan-dalàna "vaovao" tokoa e !
Ireto izany ireo vahoaka adala, "communs des mortels" lasa "sujets du roi". Izao ny hafatr'izy ireo : "Ny Andriamanitra tsy andrinao, andrinay foana"
Satria tokoa inona intsony moa ny manakana azy tsy hisalotra ny satro-boninahitry ny maha-mpanjakan’i Madagasikara azy ? Lasa "sujets communs des mortels" daholo isika mianakavy. Fa ry zalahy ao ambony ao sady tsy azo kitihina sy ozongozonina intsony no lasa "immortels".
Zavatra mifanipaka anefa izany eritreritr'adala izany. Izany mpanjaka izany dia avy amin’Andriamanitra ny fahefany. Izany marina ve ny amin’ity filoha afa noho ny afa ity ? Io ambany io ny fianianana nataony:
25 Janoary 2014. Kianjan'i Mahamasina sambany teo amin'ny Tantara, tsy feno...
Ny 25 sy 26 May 2017 dia hivory ry "Bien-aimés frères" ireto, ao aminy Carlton Anosy
Ireo manaraka eo ambany ireo kosa ny lalàna avy amin’Andriamanitra mikasika ny lainga sy ny fitaka. Ny mahavariana -nefa tokony tsy hahagaga intsony- dia zanaka pasitora izy ary pasitora ihany koa ny rahalahiny. Kanefa, etsy andaniny dia mpikambana ao amin'ny "Grande Loge Rite Malgache" -sampana ao amin'ny "Grande Loge Nationale de Madagascar"-, izany hoe "Franc-maçon" ingahy Hery Rajaonarimampianina. "Ceci explique cela", hoy ny Frantsay na hoe : izany ny mahatonga azy manao ireo fihetsika jadona ireo. Afa ny zavatra mivoaka eo aminy vavany ary mifanipaka amin'ny teniny ny fihetsika sy ny fomba ataony, voarirotry ny "franc-maçonnerie".
Iza moa ny tokan-trano Malagasy tsy manana izany Baiboly izany ? Fa firy ny ao ankohonana ao no mba mamaky azy ? Koa dia fotoanany izao hanokafana io bokin’ny fiainana io. Aza miandry ny ora farany vao hahatsapa fa tany fandalovana fotsiny ihany ny eto. Ireto ary ny tokony hotsakotsaoan’ilay filoha mikotroka fatratra ho lasa mpanjakan’i Madagasikara, amin’izao taon-jato faha-telo arivo izao. Fa ho anao mpamaky hajaina koa raha toa ka “tsy manam-potoana” hanokafana io Baiboly feno vovoka ao an-tranonao io. Tsy manery anao aho fa boky toy ny boky rehetra izy io fa tsy izaho mpanoratra akory no miseho na hiseho pasitora na olo-kendriny indrindra eto an-tany. Namaky ary nandika fotsiny ihany ny anjarako eto.
MIKASIKA NY FITAKA VAKIANA AO ANATY BAIBOLY, ILAY BOKY NODORANA NEFA TSY LEVONA
Lalin-tsaina izy ka hahomby ny fitaka hataony. Hirehareha be ao am-pony izy. Amin’ny fotoana tsy hisian’ny fanahiana no hataony mitondra faisana ny maro. Ary hitsangana hanohitra an’ilay Andrianan’ny andriana izy, kanjo ho torotoro nefa tsy hisy tànana hamely azy. (Daniela 11 : 25)
Tandremo anefa sao voafitaka ny fonareo, ka mivily hanompo andriamani-kafa ianareo ary miankohoka eo anatrehany. Dia hirehitra aminareo ny fahatezeran’i Jehovah, ka hanidy ny lanitra izy mba tsy hisy orana, ary tsy hahavokatra ny tany. Ary tsy ho ela ianareo dia ho ripaka tsy ho eo amin’ilay tany soa omen’i Jehovah anareo (Deoteronomia 11 : 16)
Nilaza ianareo hoe: “Efa nanao fifanekena tamin-dRafahafatesana izahay, ary efa nahita fahitana niaraka tamin’ny Fasana. Tsy hahatratra anay ny ranotrambo mitosaka be rehefa mandalo, satria ny lainga no ataonay fialofana, ary miafina ao amin’ny fitaka izahay”. Eny, ataony sary sokitra izany ary iankohofany. Ny antsasak’ilay hazo dia dorany ary itonoany hena hohaniny, ka voky izy. Mamindro koa izy ka miteny hoe: “Mafana aho izany! Mijery ny afo eto aho.” Ny ambiny kosa amboariny ho andriamanitra ka ataony sary sokitra. Miondrika sy miankohoka eo anatrehan’izany izy ka mivavaka aminy hoe: “Vonjeo aho fa andriamanitro ianao.” (Isaïa 28 : 15, 16, 17)
Mihinan-davenona izy. Voafitaka ny fony ka nampaniasia azy. Tsy mamonjy ny ainy izy, sady tsy milaza hoe: “Tsy fitaka fotsiny ve ity eto an-tanako ankavanana ity?”. (Isaïa 44 : 20)
Lozan’izay manorina trano nefa amin’ny tsy fahamarinana, ary manao efitra ambony rihana nefa amin’ny fitaka, ka mampiasa olona nefa asainy miasa maina fotsiny ireny ary tsy omeny karama. Eny, lozan’izay manao hoe: “Hanao trano lehibe ho an’ny tenako aho, sy efitra ambony rihana malalaka be”. (Jeremia 22 : 13, 14)
“Fa misy ratsy fanahy amin’ny oloko. Mitilitily tsy misy farany toy ny mpamandri-borona mifitsaka ao amin’ny miafina izy ireo. Mamela-pandrika mahafaty izy ireo, ary olona no azony. Toy ny tranom-borona feno vorona, dia feno fitaka koa ny tranony. Koa nanjary olona ambony sy manankarena izy ireo, ka nihanatavy sy mandimandina. Tafahoatra loatra ny ratsy vitany. Tsy mba nitsara araka ny hitsiny izy ireo, ary na ny kamboty ray aza tsy nomeny rariny. Amin’izay dia mahomby izy ireo. Tsy noraisiny an-tànana ny fitsaràna ny mahantra.’” “Koa tsy tokony hanao ampamoaka ve aho noho izany?”, hoy i Jehovah. “Ary tsy tokony hovaliako ve ny firenena toy izany? Zava-mahagaga sy mahatsiravina no mitranga ao amin’ilay tany: Maminany lainga ny mpaminany, fahefany ny mpisorona. Dia tian’ny oloko erỳ izany! Koa hanao ahoana re ianareo rehefa hifarana izany rehetra izany e?”. (Jeremia 5: 26, 27, 28, 29, 30)
Nahoana no mivadika amiko ity vahoakan’i Jerosalema ity sady mikiribiby amin’izany fivadihany izany? Mamitaka foana izy ireo, ary tsy mety miverina amiko. Nihaino sy nanongilan-tsofina aho, kanefa tsy tsara ny zavatra reko noresahin’izy ireo. Tsy mba nisy nibebaka tamin’ny faharatsiany, ka nanao hoe: “Fa inona ity nataoko?”. (Jeremia 9 : 5, 6)
Hilaza zavatra tsy marina ve ianareo mba hiarovana an’Andriamanitra, Sa hilaza fitaka mba hiarovana azy? Hiangaranareo ve izy? Moa ve ianareo hiady ho an’ilay tena Andriamanitra, any amin’ny fitsarana? Hahasoa anareo ve raha mandinika ny momba anareo izy? Sa hambakainareo izy, toy ny fanambaka olombelona mety maty? (Joba 13 : 7, 8, 9)
Dia hoy izy: “Mitandrema sao ho voafitaka ianareo. Fa maro no ho tonga amin’ny anarako, hilaza hoe: ‘Izaho no izy’, sy hoe: ‘Efa manatona ny fotoana voatondro.’ Koa aza manaraka azy. Ary aza raiki-tahotra rehefa mandre ady sy korontana ianareo, fa tsy maintsy hitranga aloha izany, nefa tsy ho tonga avy hatrany ny farany”. (Lioka 21 : 8, 9)
Koa asaivo atao tsara ambina ny fasana hatramin’ny andro fahatelo, sao ho avy ny mpianany ka hangalatra azy ary hilaza amin’ny olona hoe: ‘Efa natsangana tamin’ny maty izy!’ Dia ho ratsy noho ny voalohany izany fitaka farany izany”. (Matio 27 : 64)
Ny fahendren’ny malina no mahatonga azy hahalala ny ataony, fa mamitaka kosa ny hadalan’ny tsisy saina. (Ohabolana 14 : 8)
Mamin’ny olona ny hanina azo amin’ny fitaka; kanjo ho feno fasika ny vavany any am-parany. (Ohabolana 20 : 17)
Fitaka no entiny manafina ny fankahalany. Nefa ny haratsiany dia haharihary eo am-pahibemaso (na koa : hibaribary eo anivon’ny fiangonana ny toetra ratsiny). (Ohabolana 26 : 26)
“Fasana misokatra ny tendany, ary ny lelany no amitahany.” “Poizin’ny bibilava no ao ambadiky ny molony.” “Feno ozona sy teny maharary ny vavany.” “Mailaka handatsa-drà ny tongony.” “Misy faharavana sy fahoriana eny amin’izay alehany, ary tsy fantany ny lalàn’ny fiadanana.” “Tsy hitan’izy ireo izay antony tokony hatahorana an’Andriamanitra”. (Romana 3 : 13, 14, 15, 16, 17, 18)
Nahoana ianao no mirehareha amin’ny zava-dratsy, ry ilay mahery ô? Mitohy isan’andro ny hatsaram-panahy feno fitiavana asehon’Andriamanitra. Ny hanisy ratsy no kendren’ny lelanao, izay maranitra toy ny hareza, Sady mamitaka. Ny ratsy no tianao noho ny tsara, Ary ny mandainga noho ny milaza ny marina. Tianao daholo izay teny mitondra loza, Ry lela mpamitaka ô! Horinganin’Andriamanitra mandrakizay ianao. Handavo anao izy, ary hisintona anao avy ao an-tranolainao. Hanongotra anao hiala amin’ny tanin’ny velona tokoa izy. (Salama 52 : 1, 2, 3, 4, 5)
MIKASIKA NY LAINGA VAKIANA AO ANATY BAIBOLY, ILAY BOKY NODORANA NEFA TSY LEVONA
Lainga fotsiny no voasoratry ny penin’ny mpitan-tsoratra. Menatra ny hendry. Mihorohoro sy voafandrika izy ireo. Ny tenin’i Jehovah no nolaviny, ka inona intsony no fahendrena ananany? (Jeremia 9 : 8, 9)
Hankasitrahana ny tenin’ny marina, fa lainga kosa no eo am-bavan’ny ratsy fanahy. (Ohabolana 10 : 32)
“Ary ao am-pony ao, dia samy haniry hanao ratsy ireo mpanjaka roa ireo, ka hilaza lainga eo amin’ny latabatra iray ihany. Tsy hisy hahomby anefa izay hataony, satria amin’ny fotoana voatondro vao ho tonga ny farany. (Daniela 11 : 27)
Fa any ivelany ny alika sy ny mpilalao ody sy ny mpijangajanga sy ny mpamono olona sy ny mpanompo sampy ary izay tia lainga sy mpandainga’. (Apokalipsy 22 : 15)
Ary hozimbazimbainareo eo imason’ny oloko ve aho mba hahazoanareo vary orza eran’ny tànana sy hahazoanareo sombi-mofo, ka vonoinareo izay tsy tokony ho faty ary tsimbininareo kosa izay tokony ho faty, noho ny nilazanareo lainga tamin’ny oloko, izay nihaino ny lainganareo?”’(Ezekiela 13 : 19)
Nataonareo izay hahakivy ny fon’ny olo-marina noho ny lainganareo, nefa izaho aza tsy nanao izay hampalahelo azy akory. Nanome tànana ny ratsy fanahy koa ianareo, mba tsy hialany amin’ny lalan-dratsiny ka hitsimbinana ny ainy. (Ezekiela 13 : 22)
“‘Koa izao no lazain’i Jehovah Tompo Fara Tampony: “‘Noho ianareo nilaza zavatra tsy marina sy nahita fahitana mandainga, dia homelohiko ianareo’, hoy i Jehovah Tompo Fara Tampony.” Ary ny tanako hamely an’ireo mpaminany mahita fahitana tsy marina sy maminany lainga avy amin’ny sikidy. Tsy ho anisan’ny oloko intsony izy ireo, dia ireo oloko mpinamana akaiky. (Ezekiela 13 : 8, 9)
Zavatra lainga no tao amin’ny fahitana nambaran’ny mpaminaninao taminao. Tokony ho naharihariny ny fahadisoanao mba tsy hahalasa babo anao, nefa tsy nataony izany, Fa mbola lainga sy famitahana ihany no tao amin’ny fahitana nambarany taminao. (Fitomaniana 2 : 14)
Hahita loza izy fa nandositra ahy! Ary horobaina izy fa nandika ny lalàko! Mba nanavotra azy aho, nefa nandainga momba ahy izy. (Hosea 7 : 13)
Hiala koa izy ireny noho ny fihatsarambelatsihin’ny mpandainga, izay manana feon’ny fieritreretana toy ny voatomboky ny vy mahamay. (1 Timoty 4 : 2)
Santionany fotsiny ihany ireo. Tena mamaky Baiboly sy matahotra an’Andriamanitra ary mitandrina ny Teniny tokoa ve ilay kandida laharana faha-3 lasa filoha voafidy sy mba miditra am-piangonana ihany ? Tsia ny valiny raha ny zava-bitany nandritra izay telo volana izay ary mitohy sy hitohy ka hivadika tanteraka ho mpanjaka kely hitovy amin’Andriamanitra izy. Hatraiza anefa izany fahefan’izany "mpanjaka Hery Martial I" izany ?
Ary androany Alahady 27 Aprily 2014 tao aminy Vatican any Roma, dia niara-nasondrotry ny Papa François ho Olo-masina ny Papa Jean XXIII sy Papa Jean Paul II. Ny eto Madagasikaraka dia toa olo-mantsina hatrany no mitondra ny firenena... Ka ho entina aiza hono anefa, nefa mba voafidy ihany?
Jeannot Ramambazafy – Alahady 27 Aprily 2014
Publié le 25 Avril 2014 par Jeannot Ramambazafy
Madagascar, 8è Rallye TOTAL -2014-: VIDEOS
Laurent Stouffe, Directeur général de TOTAL Madagasikara, a demandé une vraie minute de silence, en hommage à Fanja Razakarivony et Eric Razafitsifera, qui nous ont quitté pour un monde meilleur
Discours de Rado Razakaboana, Président de la FMMSAM
Petit mot de Jimmy Rakotofiringa, Président de la FSAM
Explications en malgache de Sandy Solofonirina, Présidente du Collège des Officiels
« On ne va pas changer quelque chose qui gagne, qui réussit ! », a affirmé le nouveau Dg de TOTAL Madagasikara, en parlant du partenariat de cette société pétrolière française et la FMMSAM
8ème édition du Rallye TOTAL à Madagascar, les 17, 18 et 19 mai 2014
Reportage de Jeannot RAMAMBAZAFY
Publié le 21 Avril 2014 par Jeannot Ramambazafy
Si ces trois jeunes femmes malgaches -qui étaient à Paris en 1931- ne sont pas décédées, elles doivent avoir plus de 80 ans... C'étaient des artistes du théâtre d'Ambatovinaky
Ces enfants doivent être toutes grands-mères. Sont-elles plus heureuses actuellement ? Si elles sont décédées, certainement
L’adjectif immémorial signifie « si ancien que l’on ne peut s’en souvenir ». Pour cette Pâques 2014, j’ai passé la nuit du dimanche de Pâques pour aller puiser dans mes archives des clichés de la ville d'Antananarivo -mais aussi de personnes-, datant de la période coloniale et d’avant 1972. Mais sans ordre chronologique. Certains de ces clichés, sous forme de cartes postales, n'ont pas eu besoin de légende. Ils sont l'oeuvre de missionnaires, de militaires et de "résidents". Peu de Malgaches étaient équipés à l'époque. Mais j'ai connu les studios STAVY et HOVA, de la famille Razafitrimo qu'il faut remercier ici.
" Voyage à Madagascar " de Louis Catat. Disponible à la librairie Walden spécialiste des livres anciens
En attendant, la catastrophe socio-politique qui ne va pas tarder à s’abattre sur cette grande île dont le peuple a encore été floué par un dictateur en puissance (ce n’est pas une annonce divinatoire mais le recommencement d’une sale histoire de pouvoir absolu), je vous offre ces clichés en guise de cadeau pascal. J’ai un projet à leur sujet mais je vous en reparlerai une autre fois. Bon visionnage ! En passant: tirées à plusieurs exemplaires, vous pourrez trouver ces cartes postales sur Antananarivo -et aussi d'autres régions malgaches- en allant fouiner chez les bouquinistes sur les quais de Paris...
Jeannot Ramambazafy – Lundi de Pâques 2014
1929. Quatre prêtres malgaches. Le premier Malgache à avoir été ordonné prêtre, en cette année, est Thomas Zafimasina
Un enterrement (plutôt une procession funéraire) en 1920
Le lac Anosy en 1904
Vue sur Mahamasina et le grand vide total des années 1910
Mahamasina commence à prendre forme à la fin des années 1940
Pas encore de complexe sportif
Tous les ministères et l'hôtel Carlton n'existaient pas encore et les 67ha -au dernier plan- n'avaient pas encore été aménagés en cités. Mais le collège Saint Michel, au centre, existait déjà
Milieu des années 1970. L'hôtel Hilton (actuellement Carlton) est debout et le quartier des ministères en plein aménagement (à gauche)
Fin des années 1970. Les ministères sont là et les cités des 67ha aussi. Le Palais de la Reine était encore intact
La route descendant du Palais de la Reine, en 1908. Avec des colonnes, le Palais de Justice dénommé Ambatondrafandra. A gauche, en haut, une des quatre tours du Palais du Premier ministre, à Andafiavaratra
Voilà justement le Palais du Premier ministre d'Andafiavaratra
Les quatre chemins à Ambatonakanga, en 1926, pris à partir de la descente d'Ambatovinaky
Le théâtre d'Ambatovinaky, sur la descente du cliché précédant
Antaninarenina dans les années 1950
Antaninarenina, place de l'Indépendance. Actuellement, c'est le buste de Philibert Tsiranana, premier président de la république de Madagascar, qui a remplacé ce monument français
C'est l'actuel ONE (Office national pour l'Environnement) toujours à Antaninarenina
Analakely et ses environs dans les années 1920. Comparé aux infrastructures actuelles, on peut dire que les quartiers se sont développés. Mais n'importe comment...
Le Palais du gouverneur colonial, actuellement Palais de la Présidence d'Ambohitsorohitra
Dans les années 1930. En descendant l'escalier d'Antaninarenina, alors dénommé escalier Lambert. Au fond, l'escalier d'Ambondrona alors dénommé escalier De Lastelle
Cette rue part d'Ambohijatovo pour rejoindre la Pergola. Le cliché a été pris au coin de la descente venant des quatre chemins, en passant par l'actuel CITE à Ambatonakanga
Vers Amparibe, à partir des quatre chemins
Le tunnel menant à Mahamasina, en 1950. Il se dénommait Tunnel Hubert Garbit
La statue de Gallieni, à Ambohijatovo, en 1954. Elle a été déboulonnée en 1973, après les évènements de mai 1972
Vue du marché d'Analakely, dans des temps effectivement très anciens
Analakely. L'époque des pousse-pousse et des 203 camionnettes. Cliché "coloré"
Le zoma et ses célèbres parasols. Une autre époque. L'endroit est devenu un parking
Mâtin ! Des voitures d'Al Capone !
Pousse-pousse et 2CV peu après le retour de l'Indépendance
Analakely plus proche de notre époque actuelle
La gare de soarano à deux époques où il faisait vraiment bon vivre
L'hôtel de ville avant l'incendie du 13 mai 1972
Avenue de l'Indépendance juste après... l'Indépendance
Publié le 20 Avril 2014 par Jeannot Ramambazafy
Filoha Rajaonarimampianina: Izy sy Andriamanitra no hifampitana izany…
Mitaratra amin’ireo sary rehetra eo ambony ireo ny ho Tantaran'ny nandalovan'Ingahy Hery Martial Rakotoarimanana Rajaonarimampianina teo amin'io fitondrana nindramina io, atsy ho atsy… Ho azy manokana ity lahatsoratra ity, amin'izao andron'ny Paska 2014 izao.
Nianiana ianao ary tsy kilalao an-jaza akory izany fomba izany. Ary teo anatrehan’Andriamanitra sy ny vahoaka Malagasy ianao no nanambara izao manaraka izao:
« Eto anatrehan'Andriamanitra Andriananahary sy ny Firenena ary ny Vahoaka, mianiana aho fa hanantanteraka an-tsakany sy an-davany ary amim-pahamarinana ny andraikitra lehibe maha-Filohan'ny Firenena Malagasy ahy. Mianiana aho fa hampiasa ny fahefana natolotra ahy ary hanokana ny heriko rehetra hiarovana sy hanamafisana ny firaisam-pirenena sy ny zon'olombelona. Mianiana aho fa hanaja sy hitandrina toy ny anakandriamaso ny Lalàmpanorenana sy ny lalàmpanjakana, hikatsaka hatrany ny soa ho an'ny Vahoaka malagasy tsy ankanavaka »
Marina tokoa fa misy ny fisarahan’ny fiangonana sy ny fanjakana. Io ilay hoe “laïcité de l’Etat”. Kanefa ny olom-pirenena dia manana ny finoana tsirairay avy. Ary ny "tsy finoana" ("athéisme") aza dia finoana ihany koa.
Ny mamadika pejin'ny tantara akory tsy midika hoe mamadika ny teny nomena
Ka izao ry zandry (Na tianao na tsy tianao, zandriko aman-taona ianao, ary izany hoe filoha “hajaina” izany efa tamin’ny andron’ny amiraly fa tsy hoe voatery miteny izany, raha tsy izany tsy manaja mpitondra iray): Andro Paska ny andro androany nanoratako izao. Mba natory tsara ve ianao io niatrika an’Andriamanaitra amina fotoam-pivavahana nakotroka? Raha ny fahafantarako ireny tranga rehetra taminy ianao kandida ireny mantsy, dia miaiky anao aho, mbola sahy manonona ny anaran’Andriamanitra sy manatrika fotoam-pivavahana. Satria fantany fa fihetsika feno fiatsarana ivelan-tsihy izany. Ary tsy Andriamanitra intsony koa no atahoran’ny ankamaroan’ny olombelona nanatrika tao fa ianao miseho manana ny fahefana rehetra eto Madagasikara.
Ary mahatoky koa aho fa ny toriteny natao androany alahadin’ny Paska 2014 dia nikasika indrindra ny momba anao manokana. Dia mahatoky tena tokoa ianao, amin’izao vanindrandro izao, fa azonao daholo ny voninahitra, harena, vatosoa sy volamena, ka ny lanitra sisa no ho takarina, satria “voahosotr’Andriamanitra”. Filoha voafidy ianao; filohan’ny mpitsara ianao ary mbola lehiben’ireo mpitandro ny filaminana rehetra misy eto Madagasikara koa. Ireo ny herinao eto anivon’ny vahoaka malagasy. Vahoakan’Andriamanitra anefa ireo sao adinonao koa, toa ny laka-nitàna sy ny fifanarahana nofiranao tsotra izao, satria lasa “Prezidà” ianao e ! Lehilahy lehibe nahavita tena samy irery izany ianao ka dia arahabaina e !
Adala daholo izany, aminao, ireo vahoaka ireo ?
Fa ny zavatra tsikaritry ny maro an’isa aloha, raha miala amin’iny fianianana nakotrokotroka iny, dia mpandainga ianao eo anatrehan’Andriamanitra izay misedra anao manomboka izao, fa tsy hoe nomeny ireo fahefana ireo velively. Aza mandiso sy mamita-tena mihitsy ianao! Ny vahoaka azonao fitahana fa Andriamanitra tsy azonao fitahina mandrakizay. N’inona n’inona ny antony.
Tantara hitohy tokoa io fandaingana eny anivon'ny Lapa io...
Mpandainga! Inona moa no hanenjehin’ireo mpiohoka eo anatrehanao ireo ahy? Maniratsira filoham-pirenena? Asaivo mamaky Baiboly izy ireo, satria izao no voalaza ao: Mifanohitra amin’ny marina ny hoe lainga. Filazana zavatra tsy marina amin’ny olona iray manan-jo hahafantatra ny marina izy io, amin’ny ankapobeny. Ny tanjona amin’izany, dia ny hamitaka an’ilay olona na hanisy ratsy azy na ny olon-kafa.
Avy amin’ny matoanteny hebreo hoe “ka·zav′” ny hoe milaza zavatra tsy marina (Ohabolana 14:5). Ny matoanteny hebreo hoe “sha·qar′” indray, dia midika hoe “mandainga” na “mivadika”. Avy amin’io teny io ny hoe “lainga” sy ny hoe “tsy azo itokiana” (Levitikosy 19:11; Salamo 33:17 sy; Isaia 57:4). Adika hoe “lainga” ny teny hebreo hoe “shaw′” indraindray, ary matetika izy io no manondro zava-poana, asa very maina, na zavatra tsy misy dikany (Salama 12:3; Deoteronomia 5:17; Salamo 60:11; 89:17; Zakaria 10:2). “Mandiso fanantenana” kosa no hevitra voalohan’ny matoanteny hebreo hoe “ka·chash” midika hoe mamitaka (Levitikosy 19:11; Hosea 9:2).
Tsy avela ho rano raraka fotsiny io voalazan'ny andininy faha-54 io. Misy fotoanany ny zava-drehetra eto ambon'ny tany (Ny Mpitoriteny)
Tsy mila iverenako eto ny fanitsakitahanao ny Lalampanorenana -niarahana, ary mbola hiarahana amin’ireo olona feno fankahalana efa voasesikao vola sy lainga tsara lahatra ary fampanantenana poak’aty-. Narirariranao daholo izao tontolo izao nandritra ny telo volana. Inona anefa ny vokany? Tsy fanendrena olona fa safidy manokana no nataonao, avy amina vondron’olona samihafa izay tena nanompa anao ary tsy mba nanotrona anao na iray segondra aza tamin’ireny fampielezan-kevitra ireny. Ao koa ireo nanara-dia anao amin’ny fahaizana mamadika noho ny voninahitra, harena, vatosoa sy andramena… Ny soratra sy vidéos mitoetra raha ilaina ireo.
Me Hanitra Razafimanantsoa sy Jean Max Rakotomamonjy. Toa mamo miantso polisy satria mitaky fatratra ny fandravana ny biraon'ny Antenimieram-pirenena, nefa dia nandray anjary soa aman-tsara tamin'ireo fifidianana rehetra natao ny 17 sy 18 Febroary 2014 tao Tsimbazaza. Ireto olona roa ireto aloha dia sady tsy misy trano-kenatra intsony no tsy matahotra an'Andriamanitra mihitsy
Atsy ho atsy izao -satria mihevi-tena ho andriamanitra kely latsaka an-tany ianao na koa hoe nahazo tso-drano avy any amin’Andriamanitra- dia ny mpanatanteraka (“Executif”) indray no ho terenao handrava ny mpanao lalàna (“Législatif”) voafidy ara-dalàna. Ny Antenimierampirenena izany resahiko izany. Aminy maha andriamanitra kely anao moa dia adino tanteraka ka tsy misy dikany izany hoe fisarahan'ny fahefana ("Séparation des pouvoirs"). Ary dia ho hamasin’ilay Fitsarana avo mahataka-danitra (HCC) efa ho lasa mpanomponao tanteraka, satria ianao ny sefon’ireo mpitsara ho mpikambana ao atsy ho atsy. Satria ianao tokoa ilay hoe “Président du Conseil de la magistrature”. Dia avy eo amin’izay ho avy ny ramatahora, amin’ny anaran’ny Malagasy 20 tapitrisa, satria ianao no « Chef suprême des forces armées ». Tsy zava-baovao teto Madagasikara -eny eran-tany koa aza-, izany fomba izany, ary ny Tantaran’ny zanak’olombelona no vavolombelon’izany. Adino tanteraka ve ny niafaran’ireo filoha efatra nialoha anao tamin’io toerana io ? Izay nanitsakitsaka ihany koa ny teny nomeny tamin'izy ireo nanao ilay finianana nitovy tamin’io 25 Janoary 2014 io ? Ny « herinao » dia tsy « vaovao » izany akory, fa tonta be toa ity tany fandalovana ity.
"Tsy manaraka izay voalazan'ny Lalampanorenena ny nanendrena io Praiminisitra io", hoy Maharante Jean de Dieu, vao tsy ela, alohan'ny nandadiladiany teny Iavoloha ka dia lasa minisitry ny Raharaham-panjakana ny lehilehy. Izy dia santionan'ireo tsy mijery afa-tsy ny tombontsoany ihany. Akory atao... Adinony tanteraka ny nahatonga azy tafaverina an-tanindrazana (7 taona sesi-tany tany Andafy tany) sy naha voafidy solombavambahoaka azy (Mapar). Vakio re ny tantaran'i Jodasy ao amin'ny Baiboly e !
Milaza koa ianao fa olona matahotra an’Andriamanitra. Ny marina anefa, dia ianao mihitsy no mihevitra fa lasa andriamanitra kely ka mahazo manao izay tianao atao, "amin’ny anaran’ireo Malagasy 20 tapitrisa". Satria io indray ny teny filamatra aorian'ny revolisiona sy paradisa sosialista, ny "financements parallèles", ny "république humaniste écologiste" ary ny 4L mampiesona (MAP) isan-tokan-trano. Inona moa izany no azo ataon’ny valalabe tsy mandady harona ? Ao ny hiankohoka aminao, satria izany fomba izany no efa nizàrana azy ireo nandritra ny am-polo taona maro. Sao kosa mba mahazo pitin’ireo vola be hikararana...
Be koa anefa ireo hangina fa hitana ao am-pony ao fa “Andriamanitra tsy andrinao andrinay foana”. Atody ve hiady amam-bato? Aleho maty rahampitso toa izay maty androany… Tsy ireo akory no hanenjika anao fa ny eritreritrao. Ary rehefa potraka eo ianao -tsy maintsy ho avy izany fotoana izany- dia ho jeren’ireo fotsiny miaraka amin’ny latsa isan-karazany. Eny, na ireo manodidina anao aza tsy hahalala anao intsony satria tsy “vaovao” ny tantaran’i Petera.
Ka inona sisa, Andriamatoa filoha voafidim-bahoaka, Hery Rajaonarimampianina, fa dia ianao sy AndriamanitraTokana sy Iray sisa no hifampitana izany? Inona moa no atahorako manonona ny anaranao? Ianao aza manonona ny anaran’Andriamanitra nefa jereo ity nanohizanao ilay finianana: "nizahozahovanao"...("JE suis le président élu par le peuple") ary tena "zava-dehibe loatra izany"...
Ahmad. Tompon-dakan'ny fanendrehana ny baolina kitra malagasy, tao anatin'ny folo taona, lasa minisitry ny Jono. Asa, iza tokoa no nanjono an'iza ?...
Aminy maha olombelona sy olom-pirenena aho dia tsotra ny teniko: aza adino fa diavolako ho lava ary ny kilalao mbola ho ela. Izao aloha dia aleho mihira ny hoe: “tsy resy tsy akory ny olo-mangina”. Fa tsy maintsy ho avy aminao ny fotoana hanohizana io tokon-kira io ka “vetivety ianao dia ho gina”. Tsy manozona anao aho akory fa misy farany ny zava-drehetra eto ambonin’ity tany fandalovana ity. Mpandainga ianao, arak’izay voalaza ao anaty Baiboly, ary mbola handainga foana. Zava-poana anefa izany na dia hitsara tena tahak’i Jodasy sy Petera ianao, fa manomboka manisa andro hijanonanao eo amin’io toerana tsy sahaza anao io ny vahoaka Malagasy 20 tapitrisa nofitahinao tao anatina telo volana monja. Indrindra ireo nifidy anao. Ianao no ho tadidin’ny Tantara fa ilay filoha tokony tsy ho filoha. Ary izay indrindra no mahatonga anao nanao, manao ary mbola hanao fihetsika feno fitaka.
Koa matahotra an’Andriamanitra tokoa ve ianao? Tadidio ary fa i Satana no mpandainga voalohany teto ambonin’ny tany, namitaka an-dry Adama sy Eva, tamin’ny alàlan’ny menarana. Amin’izao fotoana izao dia maro be ireo menarana ireo ao an-dapa ao. Ka tandremo sao lahy dia ianao indray no ho kakeriny…
Ny ati-panahy dia ny fomba fijeren-tsika ny zava-mahitsy sy marina ara-moraly tsotra izao, na koa ny fiverenan’ny zavatra nataon-tsika ihany ("nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude" - aminy teny latina etsy ambany)
Iza no hamonjy anao amin’io ora farany io? Na ireo fatra mpiaro anao amin'izao fotana izao, noho ny fanantenana fa hisy tombontsoa homenao azy aza dia hitodi-damosina anao ary hanaratsy anao tanteraka. Satria ny tody tsy misy fa ny nataonao ihany no hifototra aminao. Amin'izao fotoana izao aloha, anao ny fahefana (na mandalo fotsiny ihany), fa an'Andriamanitra kosa ny voninahitra mandrakizay. Ary dia tsy manana mpanohitra ara-politika tokoa ianao hatreto... Fa ny lainga -na tsara lahatra aza-, zandry, tsy halevon'ny Marina na aoviana na oviana. Satria ny Fahamarinana avy any amin'Andriamanitra ka tsy mety ho faty mandrakizay doria ihany koa.
Farany dia farany: NEMO AUDITUR PROPRIAM TURPITUDINEM ALLEGANS. Amen !
Jeannot Ramambazafy, Alahady 20 Aprily 2014, andron’ny Paska
Publié le 17 Avril 2014 par Jeannot Ramambazafy
Députés MAPAR: position officielle, 15 avril 2014
PARJURES ! CLIQUEZ ICI
MAHARANTE JEAN DE DIEU LE TRAITRE. CLIQUEZ ICI